formart အမျိုးမျိုးကို အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပေးမဲ့HD Video Converter pro. ~ မိုးညိုသား
formart အမျိုးမျိုးကို အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပေးမဲ့HD Video Converter pro.
12:55 AM Converter, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
အင်တာနက်က ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ ရုပ်ရှင် တွေ Movies တွေကို မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့formart အမျိုးမျိုး ကိုအရည်အသွေး ပြည့် ဝအောင် convert ပြုလုပ်ပေးမဲ့HD Video Converter pro...ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့မူလ အရည်အသွေး ကိုမပျက်စေပဲ မိမိတို့ လိုသလို ပါဖိုင်ဆိုးကို ချုံ့ လို့ ရတာရယ် iPad, iPod, iPhone, Apple TV, PS3, PSP, Xbox, Zune, PDA, BlackBerry, Nokia, Android, Zen, စတဲ့ mobile device တွေအတွက်ရော အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့စမ်းကြည် စေချင်ပါတယ်။ full version ဖြစ်အောင်လိုင်စင် ကုဒ်ကိုထည့် ထားပေးပါတယ်။
regeister ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့် ပေးလိုက်ပါ။အသုံးပြုပုံကတော့ မိမိတို့ ပြောင်းလိုတဲ့ ဖိုင်ကို add ကနေပြပေးလိုက်ပြီး မိမိပြောင်းလဲယူလိုတဲ့formart ကိုရွေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် run ကိုနိုပ်လိုက်ရုံပါပဲ...
မူရင်ဆိုဒ်မှာ ပထမဆုံး နေရာမှာ HD Video Converter pro... ကိုရွေးဒေါင်းပေးပါ။
License code: 457369F00F1D9354FB7A
အသစ်တင်တိုင်း facebook ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင် ဒီမှာ like လုပ်ပေးပါ။